Psaumes 77 BDS - Nnwom 77 AKCB
1Misu mefrɛɛ Onyankopɔn srɛɛ mmoa;
misu mefrɛɛ no sɛ ontie me.
2Bere a mewɔ ahohiahia mu no, mehwehwɛɛ Awurade;
metrɛw me nsa a ɛmpa abaw mu anadwo
3Onyankopɔn mekaee wo, na misii apini;
medwenee, na me honhom tɔɔ beraw.
amanehunu dodow nti, mantumi ankasa.
teteete mfe no ho;
Me koma dwenee ho na me honhom bisae se:
Ɔrenhu yɛn mmɔbɔ bio ana?
8Nʼadɔe a ɛnsa da atu ayera koraa ana?
Na ne bɔhyɛ no, amma mu koraa ana?
9Onyankopɔn werɛ afi sɛ ɔbɛyɛ mmɔborɔhunufo ana?
Ɔde abufuw atwe nʼayamhyehye no asan ana?”
10Afei misusuwii se, “Eyi de, mɛsrɛ:
mfe a Ɔsorosoroni no teɛɛ ne nsa nifa mu no.”
yiw, mɛkae wo tete anwonwade no.
na masusuw wo nneyɛe akɛse nyinaa ho.
13Onyankopɔn, wʼakwan yɛ kronkron.
Onyame bɛn na ɔso sɛ yɛn Nyankopɔn?
14Wone Onyankopɔn a woyɛ anwonwade;
15Wode wo tumi nsa no gyee wo nkurɔfo,
Yakob ne Yosef asefo no.
16Onyankopɔn, nsu no huu wo,
nsu no huu wo na wɔpopoe;
bun no mpo ho wosowee.
17Omununkum tɔɔ nsu,
aprannaa gyigyee wɔ ɔsoro;
na wo bɛmma paa gya dii akɔneaba.
18Wʼaprannaa bobɔɔ mu wɔ mfɛtɛ no mu,
wʼanyinam hyerɛn wiase;
asase popoe, na ɛwosowee.
19Wode wo kwan faa po mu,
wode faa nsu kɛse mu,
nanso wɔanhu wʼanammɔn.
20Wonam Mose ne Aaron abasa so,
dii wo nkurɔfo anim sɛ nguankuw.
AKCB : Nnwom 77